English Speaking _ Job Expressions (11) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Wednesday, May 25, 2016 LearningEnglish, SayarWinNaingOo No comments
ခက်မယ်ထင်တဲ့ ဝေါဟာရလေးတွေကို ထည့်ပေးထားပါတယ် ၊ ဖတ်ကြည့်ပြီး နားမလည်တဲ့ စာလုံးလေးတွေ တွေ့တာနဲ့ လှည့်ထွက်မသွားလိုက်ပါနဲ့ ၊ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာစဉ် ငယ်ငယ်ကစပြီး ခက်ခဲတာ..ပိုပြီးခက်ခဲတာ တွေကို ကြိုးစားပြီး ၊ တိုး..တိုးပြီး မှတ်လာခဲ့ကြရတာ ၊ နားလည်အောင် ကြိုးစားလာကြရတာ မဟုတ်ပါလားဗျာ
(1) How do you make important decisions?
အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုပြုလုပ်ပါသလဲ
(2) I make important decisions by examining all the details and then weighing the pro's and con's for each decision.
ကျနော်က အသေးစိတ်အချက်အားလုံး စစ်ဆေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီရဲ့ ကောင်းကွက်တွေ ဆိုးချက်တွေကို ချိန်ဆချင့်တွက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြုလုပ်ပါတယ်
(3) I believe all decisions should be made by having all the information. If you are missing an important detail, it's easy to makeabad decision. So I make important decisions by having all of the information.
သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို ရယူခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ် ။ ခင်ဗျားက အဓိကကျတဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တစ်ခု ကျန်နေခဲ့လျင် အဲဒါက ဆိုးရွားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ လွယ်ကူသွားပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်က သတင်းအချက်အလက်အားလုံး ရယူခြင်းဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြုလုပ်ပါတယ် ။
(4) Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can find and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions.
သတင်းအချက်အလက်တွေကနေရတဲ့ ဗဟုသုတ ၊ ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံကနေရတဲ့ ညာဏ်ပညာ တွေကိုသုံးပြီး အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လုပ်ပါတယ် ။ ကျနော်က တွေ့နိုင်သမျှ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို စုဆောင်းပါမယ် ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စိစစ်နေစဉ်မှာ အတွေ့အကြုံကို အသုံးချပါမယ် ။ အဲဒီတွဲစပ်ပေါင်းစည်းမှုနဲ့ မှန်ကန်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကျနော်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မှုရှိပါတယ် ။
(5) Why should we hire you?
ကျနော်တို့က ခင်ဗျားကိုဘာလို့ ငှားရမ်း (အလုပ်ခန့်ထား) သင့်ပါသလဲ
(6) I should be hired because I'm smart and friendly. I'm great at solving problems and love challenges. Most importantly, I'm dependable and reliable.
ကျနော်ကိုခန့်အပ်သင့်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆို ကျနော်က တော်ပြီး ပေါင်းဖို့သင်းဖို့ကောင်းပါတယ် ။ ကျနော်က ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ အလွန်တော်ပါတယ် ပြီးတော့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်ပါတယ် ။ အရေးအကြီးဆုံးက ကျနော်ကို အမှီခိုပြုနိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ် ။
(7) You should hire me because I'm confident and I'll do the best job. This position requires someone that will work well without supervision. I know how to manage my time and organize my work well. So, I'm confident I'll be the best candidate for this position.
ခင်ဗျားတို့ကျနော့်ကိုခန့်သင့်ပါတယ် ဘာကြောင့်လည်းဆို ကျနော်က ယုံကြည်မှုနဲ့ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေရာ (ရာထူး) က ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု မလိုပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက် လိုအပ်ပါတယ် ။ ကျနော်က အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမယ် ဆိုတာ သိပါတယ် ပြီးတော့ အလုပ်တွေကို ကောင်းစွာ စီစဉ်နေရာချထားတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်က ဒီရာထူးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခံရတဲ့သူ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
(8) How long does the probation period last?
(9) The probation period last for three month.
(10) Can you tell me what part of my performance you will look at?
ကျနော့်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲက ဘယ်အပိုင်းကို ခင်ဗျားကြည့်မယ်ဆိုတာ ပြောပြနိုင်ပါမလား
(11) Yes I will look at your punctuality, work performance and your relation with me.
အင်းပေါ့ ၊ ခင်ဗျားရဲ့ အလုပ်ကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အရည်အချင်း ၊ အလုပ်စွမ်းဆောင်ချက်ရယ် ကျနော်နဲ့ ဆက်ဆံမှုအပေါ်ကြည့်မှာပါ ။
Decision (n) ဆုံးဖြတ်ချက်
Examining (n) စူးစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
Details (n) အသေးစိတ်များ
Weighing (n) အလေးချိန်ခြင်း ၊ ချိန်ဆစစ်ဆေးခြင်း
pro's and con’s (n) ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်များ
gather (v) စုဆောင်းသည်
apply (v) အသုံးချသည် ၊ အသုံးဝင်အောင်လုပ်သည်
wisdom (n) ညာဏ်ပညာ
analyzing (n) စိစစ်ခြင်း
combination (n) ပေါင်းစပ်မှု
confident (adj) ယုံကြည်မှုရှိသော
hire (v) ငှားရမ်းသည် ၊ အလုပ်ခန့်ထားသည်
efficient (adj) လုံလောက်သော
solving problems (n) ပြဿနာများ ဖြေရှင်းခြင်း
dependable (adj) မှီခိုနိုင်သော
supervision (n) ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းမှု
reliable (adj) ယုံကြည်အားထားရသော
candidate (n) ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ သင့်တော်သူ ၊ ရွေးချယ်ခံရသူ
probation period (n) အစမ်းခန့်ကာလ
performance (n) တင်ဆက်မှု ၊ လုပ်ဆောင်မှု
punctuality (n) သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရည်အချင်း
relation (n) ဆက်စပ်မှု ၊ ဆက်ဆံရေး
ကိုက်ညီ သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ ၀ါကျလေးတွေကို ဆွဲထုတ် ၊ ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ version ရအောင် ရောသမမွှေလုပ်ပြီး သုံးပါ ၊ သုံး..သုံး မသုံးသုံး ..အားလုံးရထားလျင် အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်တက်စေပါလိမ့်မယ် ၊ ပညာရပ်စကားလုံးတွေမို့ လှပါတယ် ..